Mahavariana Indrindra Oniversite In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Mahavariana Indrindra Oniversite In Eoropa
Mahavariana Indrindra Oniversite In Eoropa
Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 13/05/2021)
Mitady Indrindra Mahavariana Anjerimanontolo In Eoropa? Vakio avy eo amin'ny! Fantatsika mifidy oniversite dia manan-danja ny safidy. Mazava ho azy, tsy maintsy mandray an-mandinika ny fampianarana sy ny fianarana eny amin'ny oniversite fotodrafitrasa izay manome rehefa mifidy izay olona hanatrika. Na izany aza, indraindray ny fihetseham-po esory tsara ny taovany Tsara ny handeha koa. eto amin'ny Save A Train efa nanao fikarohana izany ny sasany ho anao sy nanangona ny lisitry ny amin'ny Indrindra mahatalanjona Anjerimanontolo. Mirehareha avokoa izy rehetra mahatalanjona trano. Ny sasany manana mahagaga ny tantara, fa ny sasany amin'ireo kokoa vao naorina ihany koa ny oniversite nasongadina ao amin'ny lisitra ity. Ateriny kokoa niara-belona modernist hatsarana amin'ny trano sy ny kanto endri-javatra. Ampahafantaro anay inona no tianao indrindra!
The University of Bologna in Italia dia heverina ho tranainy indrindra eran-tany amin'ny oniversite, rehefa naorina tao 1088. Io lisitra avy amin'ny Mahavariana indrindra Anjerimanontolo any Eoropa, fa izao azo raisina iray amin'ireo oniversite mampitolagaga indrindra eto an-tany. Ity ambany ity ny sary Palazzo Poggi, iray amin'ireo tena rafitry ny oniversite. Izany ity tranon'ny telo ny oniversite tranombakoka amin'ny fampirantiana ao amin'ny voajanahary tantara, Anatomy, fiterahana, Fizìka, sy ny simia. Eny, mamaky izany zo izany. Manana ny tranombakoka!
Nefa tsy ny trano ihany no tokony hitsidika rehefa scoping ny Indrindra mahatalanjona Anjerimanontolo. Maro ireo trano ao amin'ny oniversite fa mba hitafy fitsidihana ny tsy maintsy-list. Anisan'izany ny College ny Espaina, ny mavokely, cloistered trano sy gôtika fampidirana na Renaissance zavatra ao amin'ny famolavolana. Ary koa ny tsara tarehy maritrano, ny anjerimanontolo dia an-trano ny 2-hektara Botanical Garden.
Ahoana no ahatongavana any By Train?
Noho ny foibe toerana sy ny jeografia, Bologna efa nivoatra ao anatin'ny anankiray amin'ireto lalamby lehibe fitaterana hubs ny amin'ny faritra avaratr'i Italia. Tena tsara hafa mifandray amin'ny foibe lehibe Italiana.
Bologna dia 37 minitra avy any Florence
2-hr 20-min avy Roma
2 ora from Venice
1 ora from Ferrara
A ankehitriny lalamby haingam-pandeha tsipika mamela tonga Milan in eo ho eo 65 minitra.
Amin'ny sampany anankiray ity tsipika mampifandray Bologna tamin'i Roma.
side naoty: Raha maka ny nampiofana atsimo avy any Milan, aza adino ny misambotra topimaso ny Duomo mihantona ny ambony Bologna any atsimo. ny indrindra fa ny masoandro mahaliana.
University Of Rostock, Alemaina
The University of Rostock dia tsy ny oniversite tranainy indrindra ao amin'ny Ranomasina Baltika Region; izany ihany koa ny manan-karena indrindra amin'ny fomban-drazana. Ary mazava ho azy, iray amin'ireo Anjerimanontolo Mahavariana Indrindra Ao Eoropa. Araka ny efa naorina tany 1419, tsy ho ela hankalaza ny 600th taona. Ho jery todika lava fanaon'ny fampianarana mpianatra ary manao fikarohana. Ny gôtika nahaleo trano, miaraka ny hazo-nilahatra lalambe sy ny parks manao ho mahatalanjona toerana. Tamin'ny afovoan-anjerimanontolo no maso-misambotra trano lehibe, izay nahasarika anay voalohany ny fanampiana izany ny The Indrindra mahatalanjona Anjerimanontolo. ny mijoro mifanohitra a zaridaina sy loharano, toerana tonga lafatra ho an'ny mpianatra sy ny mpitsidika ny hipetraka vetivety Nankafizinay koa ilay manan-karena ivelany ny trano.
Ny University of Rostock ahitana sivy nentim-paharazana-misaina sy ny sekoly ambony iray ifantohana ireo interdisciplinary izay mpahay siansa sy mpianatra avy amin'ny fahaizanareo miara-miasa mba hanao fikarohana ao amin'ny sehatra efatra lehibe:
fiainana, fahazavana, ary manan-danja
Antitra ny olona tsirairay sy ny fiaraha-monina
fahalalana – Kolontsaina – fiovana
Ny University of Rostock dia iray amin'ireo oniversite alemà amin'ny tena isan-karazany ny lohahevitra. Manolotra mihoatra noho ny 100 antokony: 34 farany miaraka amin'ny bakalorea, 56 amin'ny mari-pahaizana maîtrise, 37 (anisan'izany ny mpampianatra) miaraka amin'ny fanadinam-panjakana, ary 3 amin'ny Ph.D. koa, ny Ivotoerana fiofanana ho an'ny mpampianatra ary NY FANABEAZANA Ny fikarohana dia tsy vitan'ny fanaovana fikarohana ara-panabeazana fa miasa ihany koa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampiofanana ho an'ny mpampianatra.
Te-hahafantatra ny fomba hahazoana ny iray amin'ireo Mahavariana indrindra Anjerimanontolo In Eoropa? Na inona na inona tari-dalana ianao nandeha avy amin'ny (e.g. Rostock na Schwerin, Berlin na Hamburg), handray ny fiaran-dalamby ambara-pahatratranao Wismar garan'i. avy eto, ianao dia afaka misambotra ny fiara fitateram-bahoaka ny fiara fitateram-bahoaka-mijanona ao J.-R.-Bakera-Strasse amin'ny alalan'ny fampiasana andalana 4 na G (mankany Ostseeblick) na B-D (mankany Seebad Wendorf). Dia an-tongotra iray minitra monja miala amin'ity fijanonan'ny bus ity fiara zaridaina ny Campus.
(Fa ny tambajotra drafitry ny fiara fitateram-bahoaka an-tanàna làlana, fandaharam-potoana sy ny vidin-javatra, tsidiho ny tranonkalan'ny ny Hanseatic tanàna Wismar.
Berlin ho Rostock Lamasinina
Hamburg ho Rostock Lamasinina
Schwerin ho Rostock Lamasinina
Wismar ho Rostock Lamasinina
Aarhus University, Danemark no Oniversite Mahavariana ny Last In Eoropa
Aarhus University Tanàna any Danemark ny tanàna faharoa lehibe indrindra (Aarhus koa no anaran'ny tanàna) ary mampiavaka azy ny campus maitso, tanteraka tamin'i ny farihy. Ny anjerimanontolo ohatra tonga lafatra ny fomba rafitra nataon'olombelona sy ny tontolo iainana voajanahary afaka miasa amin'ny firindrana tanteraka. Nampiseho ny tena trano, tanteraka. Maro ny trano dia natao ny mpanao mari-trano Danoà C.F. Moller amin'ny modernist endrika izay maneho ny tanora ny oniversite. Moller sy ny mpiara-miasa Kay Fisker sy Povl Stegmann no tompon'andraikitra ny mavo-trano biriky. Manam-paharoa izy ireo ary koa ny miavaka amin'ny oniversite. Ny tena trano dia satria efa noheverina iray amin'ireo 12 manan-danja indrindra ao amin'ny asa an'ireo trano Danoà tantara. Ny iray amin'ireo antony maro dia iray amin'ireo Indrindra mahatalanjona Anjerimanontolo.
maherin'ny 44,000 mpianatra, Aarhus University no oniversite faharoa lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Ahitana fahaizana efatra amin'ny Siansa, Siansa sy ny Teknolojia, fahasalamana, ary Business sy ny Siansa Sosialy.
eran-orientated, ny anjerimanontolo manana fandaharan'asa fifanakalozana eo amin'ny toerana maherin'ny 50 andrim-panjakana maneran-tany. Anisan'izany ny Anjerimanontolon'i ny Tendrontany Avaratra, ny Utrecht Network, ny Nordic Center Fudan, and Nordic Centre India.
Aarhus mitoetra amin'ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra lalamby junctions tany Danemark. Misy isan'ora ny fiaingana any avaratra, atsimo, ary ny andrefana. Avy Atsimo sy Afovoany Atsinanana, ny fifandraisana dia amin'ny alalan'ny Hamburg / Flensburg. Fotoana Travel from Hamburg ho Aarhus dia dimy ora eo ho eo. Avy tany Eoropa Atsinanana hampiofanana fifandraisana ho Aarhus mandeha amin'ny alalan'ny Polonina sy Copenhagen. Aarhus dia manana asa ho isan'ora sy avy any Copenhagen. Ny famoahana ny hevitry ny amin'ilay tionelina Belt ambanin'ny Lehibe dia nohafoheziny izany dia ny ora iray. ny diany ankehitriny maka telo ora sy sasany. Misy fifandraisana maro isan'andro ny Soeda, Alemaina, ary ny sisa Eoropa.
Lamasinina maintsy ho Aarhus garan'i miala Copenhagen Airport isan'ora. Ny vidiny dia mikasika ny DKK 410 mandritra ny iray-lalana tapakila (anisan'izany ny seza famandrihana).
Vonona hanomboka famerenana ny safidy? Boky ny lamasinina tapakila Ary raha mbola mafana Weather maharitra, noho ny fanampian'ny Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Mahavariana Indrindra Oniversite In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspectacular-universities-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / en mba / de na / fiteny azy sy ny maro hafa.
Ahoana no Natao hampiofanana Travel ho toy ny Nomad alalan'ny Eoropa
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
4 Nampiofana Route Views To ho ny Instagram Shine
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby any Norvezy, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Fiaran-dalamby any Soeda, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe